Rute – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Na omi naRute 1 Mumazuva okutonga kwavatongi munyika makaita nzara, uye mumwe murume aibva kuBheterehema Judha, pamwe chete nomukadzi wake navanakomana vake vaviri, akaenda kundogara munyika yeMoabhu kwechinguva. 2 Murume uyu ainzi Erimereki, mukadzi wake achinzi Naomi, uye mazita avanakomana vake vaviri aiva Maroni naKirioni. Vaiva vaEfurata vaibva kuBheterehema Judha. Uye vakaenda kuMoabhu vakagarako. 3 […]
Posted byadmin August 26, 2017 August 26, 2017 Posted inRuteLeave a comment on Rute 1
Naomi anosangana naBhoazi 1 Zvino Naomi aiva nehama yokumurume wake, aibva kuimba yaErimereki, murume akasimukira, zita rake richinzi Bhoazi. 2 Zvino Rute muMoabhu akati kuna Naomi, “Regai ndiende kuminda ndinonongera zviyo zvinosara ndiri shure kwaani zvake achandiitira nyasha.” Naomi akati kwaari, “Enda hako mwanasikana wangu.” 3 Naizvozvo akaenda kuminda akatanga kunongera ari muminda achitevera shure […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRuteLeave a comment on Rute 2
Rute naBhoazi paBuriro 1 Rimwe zuva Naomi, vamwene vake vakati kwaari, “Mwanasikana wangu, handingaedzi kukuwanira musha here, paungawana zvinokuriritira zvakakwana? 2 Ko, Bhoazi ane vasikana vawanga uchishanda navo haasi hama yedu yapedyo here? Achange ari paburiro achirudza bhari nhasi manheru. 3 Shamba ugozora mafuta anonhuwira, ugopfeka nguo dzako dzakaisvonaka. Ipapo ugodzika kuburiro, asi usaite kuti […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRuteLeave a comment on Rute 3
Bhoazi anowana Rute 1 Zvichakadaro, Bhoazi akakwira akaenda pasuo reguta akandogarapo. Hama yapedyo mudzikinuri uya waaireva akati asvika, Bhoazi akati kwaari, “Douya napano, shamwari yangu, ugogara pasi.” Naizvozvo akaenda akandogara pasi. 2 Bhoazi akatora vakuru veguta gumi akati kwavari, “Garai pano apa,” ivo vakaita saizvozvo. 3 Ipapo akati kuhama yapedyo, mudzikinuri, “Naomi uya akadzoka kumusha […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted inRuteLeave a comment on Rute 4